Kidnapping ao Toamasina : mandrahona hanao valifaty ireo mpaka an-keriny. | NewsMada
Miainga any ny resaka valifaty! Milaza ny hamotsotra an’ i Arnaud fa hanatanteraka valifaty amin’ny ray aman-dreniny sy ny zandarin’ny Gsis kosa ny mpaka an-keriny. Ny mpitsara etsy andaniny, mampiaka-peo amin’ny fisavana ny tranon’izy ireo. Miakatra ny hafanana.
Araka ny loharanom-baovao marim-pototra voaangona manodidina ny raharaha kidnapping ao Toamasina ity, ny alahady teo, nilaza fandrahonana tamin’ny alalan’ny “SMS” tonga tamin’ny findain’ny renin’ i Arnaud ireo mpaka an-keriny mbola mihazona azy. Midika izany fa mbola velona soa aman-tsara ity ankizilahy tsy manan-tsiny ity?
“Havotsotray ny zanakareo fa ho baombaridenay kosa ny tranonareo sy ireo Giss“, hoy ny “SMS”. Ny loharanom-baovao hatrany no nilaza fa ny 31 desambra teo, hitan’ ireo mpaka an-keriny mitsangantsangana teo an-tokotaniny ity renim-pianakaviana ity ary nohamafisin’izy ireo tamin’ny alalan’ny SMS hatrany izany. Fihetsika manambara fa tsy lavitra io fokontany io ireo olon-dratsy, ary manaraka sy mahita isan’ andro ny fianakavian’ i Arnaud ry zareo.
Andanin’izany anefa, milaza Atoa Arland, rain’i Aranud, fa tsy mahafantatra velively izany vaovao izany. “Tsy fantatray hoe iza no mamoaka izany fa raha ny “conversation” farany tamin’ireo olona milaza fa mitazona an’i Arnaud, mbola manamafy ny fitakiany vola 1 500 000 euros izy ireo hatreto aloha. Mety fomba fiady ihany koa izany satria efa mihabetsaka ireo naman-dry zalahy voasambotra ka sahirana izy”, hoy izy.
Tranona mpitsara dimy voasava, nampiaka-peo ny mpitsara
Fivoriana indroa miantoana kosa, niseho tetsy amin’ny lapan’ny fitsarana ambony Toamasina omaly tontolo. Na teo aza ny fialan-tsasatry ny fitsarana, vory lanona avokoa tao amin’ny efitrano faharoa fanaovana fitsarana ampahibemaso fitsarana ambony, ny tapak’andro maraina ireo mpitsara notarihin’ny tonia mpampanoa lalàna fitsarana ambony, Andriamihangy Georges. Ho an’ ireto mpitsara, nitondra fitarainana tamin’ny lehibeny izy ireo manoloana ny fikarohana ireo jiolahy mpaka an-keriny fa saika iharan’ny tsy zakany amin’ny fomba fikarohana an’ ireo olon-dratsy ihany koa ny mpitsara satria efa tsy latsaky ny dimy izay no voasava trano.
Vokany, nampiantso ny OMC ny tolakandro ny tonia mpampanoa lalàna fitsarana ambony ary nampihaonina tamin’ny mpitsara, izay nitondra ny alahelony amin’ny fisavana trano mahazo ny namany. Manahy ny mbola hitohizan’izany amin’ny hafa koa ireto mpitsara. Ho an’ny roa tonta, tokony hojerena manokana ny fomba fanatanterahana izay ary hatsaraina ny fomba fiasa. Andaniny, amin’ ireo mpitandro ny filaminana manatanteraka ny asa, mazava ny azy fa tsy misy olona ambonin’ny lalàna. Faharoa, miankina amin’ny fomba fanondroan’ny
tambajotram-pifandraisana ” localisation appel“, ary fahatelo, fisavana trano hahazoan-dalana amin’ny tonia mpampanoa lalàna fitsarana ambaratonga voalohany no hahafaha-mananteraka izany. “Tsy misy rahateo trano misy soratra hoe “mpitsara ato” ka tsy misy ahafantarana
azy”, hoy hatrany ny fanampim-panazavana voaangona. Mbola hitohy ity fihaonana ity…